Izindaba - Intengo yensimbi yaseShayina ekhuphukayo
Ukukhuphuka kwentengo yensimbi yamaShayina
Ekuqaleni konyaka omusha, amanani ensimbi akhuphuka kakhulu.Kunezizathu ezine zokwenyuka kwamanani ensimbi.
Okokuqala, iMidlalo Yama-Olympic, amaseshini amabili kanye nenkathi yokushisa yaba nomthelela embonini yensimbi.Futhi ukuqaliswa kabusha kokukhiqizwa kwamabhizinisi ensimbi kuhamba kancane.Ngesikhathi esifanayo, ukuze kuthuthukiswe izinga lezemvelo, ukuqaliswa kabusha kokukhiqizwa engxenyeni yesibili ka-March kwakuvinjelwe ngezinga elithile.
Okwesibili, ngezidingo zezakhiwo, isimo sezulu siya ngokushisa futhi isidingo sezinto zokwakha siyakhula.Izindlu ezithengiswayo kusewumkhakha oyinhloko wokuthuthukiswa kweChina.NgoMashi, kulindeleke ukuthi amaphrojekthi wokwakha aqhutshwe kancane kancane, futhi isidingo sensimbi yokwakha sizothuthukiswa kakhulu uma kuqhathaniswa nenyanga edlule.
Thirdly, Ukwenyuka kwesidingo embonini yokukhiqiza yasekhaya.Muva nje, uMnyango Wezimboni kanye nobuchwepheshe bolwazi uveze ukuthi ukukhula okuqhubekayo kwezimboni kufanele kubekwe endaweni ebalulekile futhi kufanele kwenziwe imizamo yokuthuthukisa umnotho wezimboni.Ikakhulukazi, izimoto nemikhumbi kuzokwenza imizamo ebalulekile.Isidingo semboni yokukhiqiza sikhulise ukushuba kwensimbi.
Lngobuhlakani,fnoma ukuthekelisa ngensimbi.Izintengo zaseChina zokuthekelisa insimbi zikhuphuke kancane ngoFebhuwari.Nokho, uma kuqhathaniswa namanye amazwe, ukukhuphuka kwentengo yokuthekelisa kuncane.Ngakho-ke ukusebenza kuphansi, futhi inzuzo yentengo yokuthekelisa yensimbi isobala kakhulu.Ngenzuzo yokuqhathanisa yekhotheshini yaseShayina yokuthekelisa insimbi, ama-oda okuthunyelwa kwensimbi yaseShayina akhuphukile ngaphansi kokungqubuzana phakathi kweRussia ne-Ukraine.
Izintengo zensimbi zenyuka kuhlanganiswe nezici zasekhaya nezangaphandlefuthikulindeleke ukuthi iqhubeke nokukhula.Ngakho-ke intengo yekhabethe lensimbi izokhuphuka ngokuqhubekayo ithintwa ukukhuphuka kwentengo yezinto zokusetshenziswa.Uma kunesidingo mayelana nalokhu, sicela wenze amalungiselelo ngangokunokwenzeka.
Isikhathi sokuthumela: Mar-03-2022